Ny LSSI-CE dia mitaky antsika rehetra izay manana bilaogy na tranokala iray Mampitandrina ny mpampiasa ny fisian'ny cookies, mampahafantatra momba azy ireo ary mitaky alalana hisintona azy ireo.
Andininy 22.2 momba ny lalàna 34 / 2002. "Ny mpamatsy serivisy dia mety mampiasa fitaovana fitahirizana sy fakana takelaka amin'ny fitaovana entin'ireo mpandray, raha toa ka Nanome ny fanekeny rehefa avy nanome azy ireo fampahalalana mazava sy feno momba ny fampiasana azy ireo, indrindra, momba ny tanjon'ny fanodinana angon-drakitra, mifanaraka amin'ny fepetra nomen'ny lalàna Organic 15 / 1999, tamin'ny Desambra 13, momba ny fiarovana ny data manokana ”.
Amin'ny maha tompon'andraikitra an'ity tranonkala ity dia niezaka aho nanaraka ny fomba henjana indrindra tamin'ny andininy 22.2 amin'ny lalàna 34/2002 momba ny serivisy ao amin'ny Fikambanana fampahalalam-baovao sy ny varotra elektronika momba ny cookies, na izany aza, rehefa jerena ny lalana ilay miasa Internet sy tranokala, tsy azo atao foana ny manavao vaovao momba ny cookies izay azon'ny antoko fahatelo ampiasaina amin'ny alàlan'ity tranonkala ity.
Mihatra indrindra amin'ireo tranga izay misy io pejy io dia misy singa mitambatra: izany hoe, lahatsoratra, antontan-taratasy, sary na horonantsary fohy izay voatahiry any an-kafa, saingy aseho eto amin'ny tranonkalantsika.
Noho izany, raha mahita ny karazana mofomamy amin'ity tranokala ity ianao ary tsy voatanisa ao anaty lisitra manaraka ireto dia azafady mba lazao ahy. Azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ny ankolafy fahatelo mba hangataka fampahalalana momba ny mofomamy izay apetranao, ny antony sy ny faharetan'ny mofomamy, ary ny fomba niantohany ny fiainanao manokana.
Ireo mofomamy ampiasain'ity tranokala ity
Ny Cookies no ampiasaina amin'ity tranokala ity ny antoko sy fahatelo Mba hahatonga anao hanana traikefa fitetezana tsara kokoa, dia afaka mizara atiny amin'ny tambajotra sosialy ianao, hanehoana doka mifototra amin'ny zavatra mahaliana anao sy hahazoana statistikan'ny mpampiasa.
Amin'ny maha mpampiasa anao, azonao atao ny mandà ny fanodinana data na fampahalalana amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo mofomamy ireo amin'ny alàlan'ny fanitsiana mifanaraka amin'ny browser. Tokony ho fantatrao anefa fa raha tsy miasa tsara ity tranokala ity.
Raha jerena ireo teny tafiditra ao amin'ny Article 22.2 ao amin'ny Lalàna 34 / 2002 of Services of the Information Society and Electronic Commerce, raha manohy mijery, dia hanaiky ny fanekenao ianao ho an'ny fampiasana mofomamy izay antsipiriako etsy ambany.
Ny cookies ao amin'ity tranokala ity dia manampy amin'ny:
Ataovy miasa tsara ity tranokala ity
Mamonjy anao mila miditra isaky ny mitsidika ity tranokala ity ianao
Aza adino ny fandaharana ataonao mandritra sy eo an-toerana
Mamela anao hijery horonan-tsary
Manatsara ny hafainganana / ny filaminana
Azonao atao ny mizara pejy amin'ny tambajotra sosialy
Manatsara hatrany ity tranokala ity
Ampisehoy anao ny doka miankina amin'ny zotram-pitadiavanao
Tsy hampiasa cookies mihitsy aho:
Angony ny fampahalalana azo fantarina manokana (tsy misy fahazoan-dàlana anananao)
Angony ny fampahalalana saro-pady (raha tsy nahazoana alalana iana)
Mizarà data momba ny fampahafantarana manokana ho an'ny antoko fahatelo
Cookies an'ny antoko fahatelo ampiasainay amin'ity tranokala ity ary tokony ho fantatrao
Ity tranonkala ity, toy ny ankamaroan'ny tranonkala, dia misy ny endri-javatra nomen'ny antoko fahatelo.
Drafitra vaovao na serivisy an'ny antoko fahatelo ihany koa nozahana matetika ho an'ny tolo-kevitra sy tatitra. Mety hanova ny toe-javatra cookie indraindray ary hiseho ireo cookies tsy misy antsipiriany amin'ity politika ity. Zava-dehibe ny fahafantaranao fa cookies tsy maharitra izy ireo izay tsy azo atao foana ny manao tatitra ary manana tanjona fandinihana sy fanombanana fotsiny izy ireo. Na izany na tsy izany dia hampiasa cookies izay manimba ny fiainanao manokana.
Anisan'ireo mofomamy fahatelo tena miorina:
Ireo vokatry ny serivisy fanadihadiana, manokana, Google Analytics mba hanampiana ny tranokala hamakafaka ny fampiasana nataon'ireo mpampiasa tranonkala sy hanatsarana ny fampiasana azy, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny angona ahafahana mamantatra ilay mpampiasa.
Ny mpampiasa dia afaka mijery ny karazana cookies ampiasain'ny Google, Google+ Cookie ary Google Maps, araka ny fepetra voalaza ao amin'ny pejiny momba ny karazana cookies ampiasainy.
Fanaraha-maso ny Google Adwords: Mampiasa ny fanarahana ny fiovam-po Google AdWords. Fitaovana maimaimpoana manondro izay mitranga ny fanarahana ny fanovana avy eo na ny mpanjifa iray dia mikitika ny doka nataonao, na nividy vokatra izy ireo na nisoratra anarana tamin'ny mailakao. Ireo cookies dia lany daty afaka 30 andro ary tsy misy fampahalalana afaka mamantatra anao manokana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanenjehana Ny dikan'ny fikaonan-dàlana sy ny politika momba ny fiainana manokana.
Remarketing Google AdWords: Mampiasa Remarketing Google AdWords izay mampiasa cookies izahay hanampiana anay handefa doka an-tserasera kendrena mifototra amin'ny fitsidihana taloha ny tranokalanay. Mampiasa an'ity fampahalalana ity i Google hanaterana doka amin'ny tranokala antoko fahatelo samihafa manerana ny Internet. Efa ho tapitra ireto cookies ireto ary tsy misy fampahalalana ahafantarana anao manokana. Mandehana mankany amin'ny Fanamarihana Google momba ny fiainana manokana raha mila fanazavana fanampiny.
Ny dokam-barotra novokarin'i AdWords, mifototra amin'ny tombontsoan'ny mpampiasa, dia azo ary aseho avy amin'ny fampahalalana nangonina avy amin'ny hetsika sy ny lalana napetraky ny mpampiasa amin'ny tranokala hafa, ny fampiasana fitaovana, rindrambaiko na rindrambaiko mifandraika amin'izany. fitaovana Google hafa (DoubleClick Cookies).
DoubleClick dia mampiasa mofomamy hanatsarana ny doka. Matetika ny mofomamy dia mikendry ny kendrena doka mifototra amin'ny votoaty mifandraika amin'ny mpampiasa iray, manatsara ny tatitra momba ny fampielezankevitra ary aza atao ny maneho ny doka hitan'ny mpampiasa.
DoubleClick dia mampiasa karatra cookie hitazahana ny fisehoana dokam-barotra amin'ny mpizaha sasany. Amin'ny fotoana famoahana ny doka amin'ny navigateur, DoubleClick dia afaka mampiasa ny kaody cookie an'ny browser izay hanamarinana hoe inona ireo doka DoubleClick efa naseho tao anatin'izany navigateur manokana izany. Toy izao ny fisorohana an'i DoubleClick ny fandefasana doka izay efa hitan'ny mpampiasa azy. Torak'izany koa, ny kaontin'ny cookie dia mamela ny DoubleClick handrakitra ireo fiovam-po mifandraika amin'ny fangatahana doka, toy ny rehefa mahita mpampiasa dokam-barotra DoubleClick ny mpampiasa iray ary, taty aoriana dia mampiasa ny browser mitovy amin'ny fitsidihana ny tranokalan'ny mpanao doka ary manao fividianana .
Ny cookies cookies DoubleClick dia tsy misy fampahalalana azo fantarina manokana. Indraindray ny cookie dia misy mpamantatra fanampiny mitovy amin'ny fisehoana amin'ny cookie ID. Ity mpamaritra ity dia ampiasaina hamantarana ny fampielezan-kevitra dokam-barotra izay nahitan'ny mpampiasa azy taloha.; Na izany aza, tsy mitahiry karazana data hafa ao anaty cookie i DoubleClick ary, ankoatr'izay, ny fampahalalana dia tsy azo fantarina manokana.
Amin'ny maha mpampiasa Internet anao, azonao atao ny manala ny fampahalalana mifandraika amin'ny fahazaran'ny pejinao, sy ny mombamomba mifandraika izay nahatonga ireo fahazarana voalaza, hidirana mivantana ary tsy andoavambola: https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es . Raha toa ka tsy manafoana io asa io ny mpampiasa iray, ny kaonty cookie tokana DoubleClick eo amin'ny sehatry ny mpizara dia mampiasa ny "OPT_OUT". Satria tsy misy intsony ny ID-mofomamy tokana iray, ny mofomamy voafono dia tsy afaka mifandray amin'ny browser manokana.
WordPress: es dia mpampiasa ny famahanana bilaogy WordPress sy sehatra fampiantranoana, fananan'ny orinasa Amerikana Avaratra Automattic, Inc. Ho an'ny tanjona toy izany, ny fampiasana cookies toy izany amin'ny alàlan'ny rafitra dia tsy eo ambany fifehezana na fitantanan'ilay olona tompon'andraikitra amin'ny tranonkala velively, ovay ny asany amin'ny fotoana rehetra, ary mampidira cookies vaovao.
Ireo mofomamy ireo dia tsy mitatitra tombony ho an'izay tompon'andraikitra amin'ity tranokala ity. Ny automattic, Inc., dia mampiasa cookies ihany koa mba hanampiana sy hamantatra ireo mpitsidika ny tranokala WordPress, hahafantatra momba ny fampiasana ny tranonkala Automattic, ary koa ny fidirany amin'ny fidirana, angonina ao amin'ny "Cookies" ao amin'ny anao politika.
Ireo sehatra horonantsary toa an'i YouTube ihany koa dia ampiasaina
Platform serivisy fampiraisana (Nametraka cookies cookies izy ireo hanarahana ny varotra izay niainga tamin'ity tranokala ity):
Amazon.com sy .es: Ireland.
Cookies tambajotra sosialy: Ny Cookies avy amin'ny tambajotra sosialy dia azo tehirizina ao amin'ny browsero anao mandritra ny fitadiavana taratasy ho an'ny instagram.com ohatra, rehefa mampiasa ny bokotra ianao hizarana ny votoatin'ny tononkira ho an'ny instagram.com amin'ny tambajotra sosialy sasany.
Ny orinasam-pifandraisana ireo mofomamy mifandraika amin'ny tambajotra sosialy ampiasain'ity tranokala ity dia manana ny paikadin'ny cookies nataony:
Twitter cookie, araka ny ao amin'ny politika momba ny tsiambaratelo ary fampiasana mofomamy.
Cookie cookie, araka ny ao amin'ny Politika momba ny tsiambaratelo sy fampiasana cookies
Cookie mifandray, araka ny omena ao amin'ny Cookies Policy
Facebook cookie, araka ny ao amin'ny Cookies Policy
Miankina amin'ny tambajotra sosialy tsirairay ny fiantraikany momba ny tsiambaratelo ary hiankina amin'ny fisafidianana manokana izay nofantenanao tamin'ireo tambajotra ireo. Na izany na tsy izany, ny olona tompon'andraikitra amin'ity tranokala ity na ireo mpanao dokambarotra dia afaka mahazo fampahalalana manokana ho an'ireo mofomamy ireo.
Manaraka, ary araka ny takian'ny andininy 22.2 an'ny LSSI, ny cookies izay azo apetraka tsy tapaka mandritra ny fizahana ity tranokala ity dia fenoina:
NAME DURATION ZAVA-KENDREN'NY
Tompony: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923bp_ut_session__smToken__wps_cookie_1415814194694 _ga _gat Tapitra izy ireo amin'ny faran'ny fivoriana. Notehirizin'izy ireo ny mombamomba ny mpampiasa sy ny fotoam-pianarany hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz 2 taona avy amin'ny fanamafisana na fanavaozana. Avelany ianao hanaraka ny tranokala hampiasa ny fitaovana Google Analytics, izay serivisy nomen'ny Google an'i Google hahazoana ny fampahalalana momba ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny tranonkala. Ny sasany amin'ireo angon-drakitra voatahiry ho an'ny fanadihadiana bebe kokoa dia: ny isan'ny fotoana nitsidihana ny tranokala, daty tamin'ny fitsidihana voalohany sy farany an'ny mpampiasa, ny faharetan'ny fitsidihana, pejy izay nidiran'ny mpampiasa ny tranokala , milina fikarohana izay nampiasain'ilay mpampiasa hanatratrana ny tranokala na rohy nofantenanao, toerana napetraka eto amin'izao tontolo izao nidiran'ny mpampiasa azy, sns. Ny fifandraisan'ireo mofomamy ireo dia voafaritra mialoha ny serivisy atolotry ny Google, ka izany no antony anomezanao hevitra anao hanamarina ilay Pejin'ny tsiambaratelo Google hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny mofomamy izay ampiasainao sy ny fomba hanafoanana azy ireo (miaraka amin'ny fahatakarana fa tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatiny na ny tenin'ny tranonkala fahatelo) ianao.
.gumroad.com__ga Rehefa tapitra ny fotoam-pivoriana Izy io no sehatra amin'ny fivarotana boky dizitaly.
dobeleclick.comDSIS- IDE-ID Andro 30 Ity mofomamy ity dia ampiasaina amin'ny fiverenana any amin'ny vinavina, ny optimization, ny tatitra ary ny fanomezan'ny dokambarotra amin'ny Internet. DoubleClick dia mandefa mofomamy any amin'ny navigateur aorian'ny fanontana rehetra, kitiho na hetsika hafa izay mitaky antso amin'ny mpizara DoubleClick. Raha manaiky ny mofomamy ny browser, dia voatahiry ao aminy. Fampahalalana misimisy kokoa
GetClicky_jsuid Andro 30 Statistics Web Clicky Tool dia ampiasaina hanangonana statistika fampiasana tranonkala tsy mitonona anarana. Ny fampahalalana izay angonina dia misy ny Internet Protocol (IP), ny karazana browser, ny Internet Service Provider (ISP), ny daty / ny fotoana, ny fanondroana / ny fidirana / pejy / handinihana ireo fironana, hitantanana ilay tranonkala ary ny hetsika an'ny mpampiasa manodidina ny tranokala. Misy fampahalalana misimisy kokoa ao amin'ny pejy Clicky fepetra momba ny tsiambaratelo .
You Tube 2 taona taorian'ny fanamafisana Io dia ahafahantsika mampiditra horonantsary YouTube. Ity fomba ity dia mety hametraka cookies ao amin'ny solo-sainanao raha vao mikitika ilay mpilalao horonantsary YouTube ianao, saingy tsy hitahiry fampahalalana mombamomba anao manokana i YouTube avy amin'ny fomba fijery anaty video mampiasa ny fomba manokana momba ny fiainana manokana. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho pejy fampahalalana momba ny YouTube
Acumbamail 2 taona taorian'ny fanamafisana Izy io dia mpanamboatra famandrihana fampahalalana misimisy kokoa
PYPF 1 volana Cookies cookies Hamafiso ny fiarovana amin'ny fidirana amin'ny sehatra fandoavam-bola PayPal. Afaka mifandray izy ireo paypalobjects.com.
Ahoana ny fomba fitantanana sy tsy manaita ireo mofomamy ireo
Raha tsy mila tranokala misy fitaovana ao anaty fitaovanao ny tranokala, dia azonao atao ny mampifanaraka ny filaharan'ny browser mba hampandrenesina anao alohan'ny handefasana cookies. Amin'ny fomba mitovy, azonao atao ny mampifanaraka ny fanamafisana, ka ny browser dia mandà ny mofomamy rehetra, na ny mofomamy fahatelo ihany. Azonao atao ny mamafa ny mofomamy izay efa ao amin'ny solosainao. Aza hadino fa tsy maintsy ampifanarahinao ny fifandraisan'ny mpanamory tsirairay sy ny fitaovana ampiasainao misaraka.
info (at) escape-room.online dia manome ho an'ireo mpampiasa izay te hisoroka ny fametrahana ireo cookies voalaza etsy ambony, rohy nomen'ireo mpitety tranonkala izay noheverina ho be mpampiasa kokoa:
Farany farany tamin'ny 20/05/2020 ny politika Cookies